Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Mpanoratry ny Taona 2018 - Natolotra an-dRavorombato ny amboara - Gazety Taratra
Gazety Taratra, 16 May 2019
"Mpanoratry ny Taona 2018" Natolotra an-dRavorombato ny amboara
Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 16 May 2019, pejy 4.
Natolotra an-dRavorombato ny amboara.
Tontosa soa aman-tsara ny lanonana! Natolotra an-dRavorombato Ony Lantoarimamy, tao amin'ny foiben'ny vaomieram-pirenena malagasy Unesco etsy Behoririka, omaly ilay amboara lehibe mana Mpanoratry ny Taona 2018 azy, araka ny fifaninanana nampanaovin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT).
Taona 1996, nanomboka nanoratra Ravorombato. Ny tononkalo no nikorisan'ny peniny tamin'izany. Taona 2004, nanoratra tantara fandefa amin'ny Radio. Taona 2008, nanoratra tantara filalao an-tsehatra. Taona 2016, nanoratra sombintantara. Ny fanoratana tantara fandefa amininy onjampeo (Radio) no tena nahafa-po ahy indrindra, hoy Ravorombato.
Anisan'ny mpanoratra manana sanganasa mahasarika azy koa i E.D. Andriamalala, i Rado, i Dox, i I.P. Andriamangatiana, i Tsiavahana. Nambarany ihany koa fa misy ny vanim-potoana maty izay tsy ahavitany manoratra mihitsy. Eo amin'ny herinandro eo ho eo no anoratako tantara fihaino, saingy mety ho tonga iray volana izany, na mety tsy ho vita mihitsy aza, hoy izy.
Ankoatra ny amboara, nasalotra azy ihany koa ny lamba landy Mpanoratry ny Taona 2018.
Tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana omaly ihany koa ny fifanakalozan-kevitra ho fanatsarana hatrany ny ezaka tahaka izao. Nisy ny soso-kevitra voarain'ny tompon'andraikitra ka nilazan'izy ireo fa ... Mila fiaraha-mientan'ny rehetra ny ezaka tahaka izao ho fampivelarana ny tontolon'ny soratra ... Hitohy hatrany ny fifaninanana Mpanoratry ny Taona.
Nifarimbona sy niara-niasa ary nanampy ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko tamin'ny fanatanterahina izao hetsika izao ny Com/Nat Unesco, ny Zoromanga, ny tsara sitrapo avy any ivelan'ny Nosy, ny Volot'Art nanafana tamin'ny feom-baliha, i Poète Rebelle nanao slam, ary ny Valiha Academie, izay nanome ny loka fianarana valiha maimaimpoana ho an-dRavorombato